Ny sarimihetsika mafia tsara indrindra: inona izany? Nohavaozina 2018 | Omeo fialamboly aho
Sarimihetsika Mafia tsara indrindra
Gabriela moran | | Cine, Action Cinema, Sinema araka ny karazany, General
ny Niteraka fahalianana avo lenta ny sarimihetsika mafia amin'ny mpihaino iraisam-pirenena. Ao amin'ireo teti-dratsy ireo dia ahitantsika ireo fitambarana mahasarika feno tantara ratsy sy hetsika. Miaraka amin'izany resahina ny olana toy ny fanondranana olona an-tsokosoko, ny fifanolanana misy eo amin'ny lafiny samy hafa ary ny fahaiza-mamorona be dia be hanatanterahana drafitra ivelan'ny lalàna napetraka. Lohahevitra lehibe hipoaka amin'ny efijery lehibe! Izany no antony anehoanay an'ity sary ity ny sarimihetsika mafia tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra.
Tsy misolo tena angano akory ny teti-dratsy: maneho ny zava-misy masiaka misy ao anatin'ny fikambanana mafia sy ny manodidina azy ireo. Na izany aza, ny tantara dia mameno adrenalinina sy hetaheta amin'ny alàlan'ny tarehin-tsoratra eccentric izay tia rendrarendra, fahefana ary fitiavam-bola. Vakio hatrany raha te hahalala momba ireo tantara mampientanentana indrindra izay novolavolain'ilay karazana sarimihetsika!
Heloka bevava ny fanondranana olona an-tsokosoko: niovaova arakaraka ny fandehan'ny fotoana sy ny faritany ny entana tsy ara-dalàna. Ny paraky, alikaola ary zava-mahadomelina sentetika dia tafiditra ao anatin'ny lisitry ny entana voasazy mandritra ny vanim-potoana samihafa. Misy fikambanana natokana ho an'ny fanondranana olona an-tsokosoko!
Noho ny fahasarotan'ny asa, mandamina ao anatin'ny vondrona fehezin'ny torolàlana tsy azo hozongozonina ireo mpanao heloka bevava. Izany no antony namoronana mafias malaza rehefa mandeha ny fotoana. Ohatra, hitantsika ny Mafia italianina, rosiana ary japoney anisan'ny tena ekena. Etsy ankilany, ny Ny kaontinanta amerikana koa dia manana tambajotra midadasika heloka bevava voarindra, izay nanentana ny sarimihetsika mafia maro.
Anisan'ireo lohateny nahatonga ny mpijery lehibe indrindra amin'ny sinema, hitantsika ireto manaraka ireto:
1 The Godfather (Fizarana I, II, III)
4 niditra an-tsokosoko
5 Ireo tsy azo kitikitihan'i Eliot Ness
7 Sarimihetsika Mafia natolotray hafa
The Godfather (Fizarana I, II, III)
Izy io dia kilalao sinema izay manana tohiny roa. Izy io dia fampifanarahana ny tantara nosoratan'i Mario Puzo ary i Francis Ford Coppola no nitantana azy. Ny horonantsary voalohany an'ny trilogy dia nahazo Oscar ho an'ny sarimihetsika tsara indrindra tamin'ny taona. Navoaka tamin'ny 1972 ary kintana Marlon Brando, Al Paccino, Robert Duvall, Richard Castellano ary Diane Keaton.
"The Godfather" mitantara ny fianakavian'i Corleone: voaforon'ny fianakaviana italianina-amerikanina izay anisan'ny fianakaviana dimy manan-danja indrindra amin'ny Cosa Nostra any New York. Ity fianakaviana ity dia tarihin'i Don Vito Corleone, izay misy ifandraisany amin'ny raharaha mafia.
Ny tantara nitantara tamin'ny lasa ny fizarana faharoa sy fahatelo izay navoaka tamin'ny 1974 sy 1990 tsirairay avy. Ny fianakaviana dia manan-janaka lahy 3 sy vehivavy iray. Ho an'ny sasany amin'izy ireo dia zava-dehibe ny manohy ny raharaham-pianakaviana, na izany aza ny hafa tsy liana. Matetika isika no mahita an'i Don Vito miara-miasa amin'ny fianakaviana mba hitazomana ny fanjakany.
Mandritra ireo horonantsary telo dia mahita fiaraha-miasa sy fifandonana eo amin'ireo fianakaviana lehibe dimy izay ao anatin'ny mafia italianina-amerikanina ary mifehy ny faritra. Ho fanampin'ny Corleones, mahita ny fianakaviana izahay Tattaglia, Barzini, Cuneo ary ny Stracci.
Raha tsy misy fisalasalana dia trilogy tsy azonao adino izany! Ny horonantsariny telo dia anisan'ny famokarana malaza indrindra sy ankafizin'ny sehatra iraisam-pirenena. Tamin'ny 2008, laharana voalohany amin'ny filaharana sarimihetsika tsara indrindra miisa 500 amin'ny fotoana rehetra izy., vita amin'ny magazine Empire.
Izy io dia iray amin'ireo famokarana be mpamorona an'i Quentin Tarantino, navoaka tamin'ny taona 1994 ary noheverina ho iray amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra nandritra ny folo taona. Ny sarimihetsika dia mizara ho toko maromaro mifandray. Misy mpilalao sarimihetsika malaza toa an'i: Uma Thurman, John Travolta, Samuel L. Jackson ary Bruce Willis.
Ny tetika mitantara ny tantaran'i Vincent sy Jules: lehilahy roa voadona. Miasa amin'ny jiolahim-boto mampidi-doza antsoina hoe izy ireo Marsellus Wallace, izay manana vady mahatalanjona atao hoe Mia. Marsellus dia niasa tamin'ny olom-peheziny tamin'ny lahasa hamerenana kitapo miafina iray izay nangalarina taminy, ary koa ny fikarakarana ny vadiny rehefa any ivelan'ny tanàna izy.
Mia dia tovovavy tsara tarehy izay mankaleo amin'ny fiainany andavanandro, amin'izay mba tafiditra am-pitiavana amin'i Vincent: Iray amin'ireo mpiasan'ny vadiny! Ny fifandraisana misy eo amin'izy roa dia maneho loza lehibe raha hitany ny toe-javatra ny lahy. Na eo aza ny fampitandreman'i Jules dia navelan'i Vincent hitombo ny fihetseham-pony ho an'i Mia ary hanaram-po amin'ny filana rehetra izy, ary ny iray amin'ireny dia tandindomin-doza ny ainy!
Amin'ny iray amin'ireo diany ataon'izy ireo mamaky ny tanàna dia manatrika klioba iray izy ireo izay misy ny seho tandindona iray indrindra amin'ny sarimihetsika amin'ny alàlan'ny dihy hafahafa iray amin'ny tany.
Miaraka amin'ny fomban'i Tarantino izay mampiavaka azy, misokatra ny tantara feno herisetra, vonoan'olona, ​​rongony ary vazivazy mainty. Raha mbola tsy nahita dia tsy hadino izany!
Ity lohateny ity dia mifanitsy amin'ny famerenana ny sarimihetsika navoaka tamin'ny 1932. Navoaka tamin'ny 1983 ny kinova vaovao ary kintana Al Paccino no kintana. "Scarface" cna mifanitsy amin'ny iray amin'ireo sarimihetsika mafia izay niteraka resabe indrindra: Nomena naoty "X" tany Etazonia noho ny habetsahan'ny herisetra ao aminy!
Tony Montana, ilay maherifo, dia mpifindra monina Kiobanina ary manana hadalana manjavozavo izay mipetraka any Etazonia. Leo ny fiainana feno fahantrana sy fetra i Tony ka nanapa-kevitra ny hanatsara ny kalitaony amin'ny vola rehetra. Izany no antony nanombohan'izy sy ny namany Manny naka asa tsy ara-dalàna ho an'ny lehiben'ny mpanohitra ao an-toerana. Vetivety dia maniry ny hetahetany ary manomboka ny orinasany manokana amin'ny fivarotana zava-mahadomelina ary manangana tambajotra fizarana sy kolikoly matanjaka. Tonga iray amin'ireo mpivarotra zava-mahadomelina manan-danja indrindra ao amin'ny faritra izy!
Rehefa mahomby izy dia manapa-kevitra ny handresy ilay sakaizan'ny fahavalony iray. Gina, nolalaovan'i Michelle Pfeiffer, dia vehivavy malaza iray izay manambady an'i Tony fotoana fohy taorian'izay.
Nanjary andevozin'ny kôkainina i Tony ary nahita fa sarotra kokoa ny mifehy ny fahatezerany. Manomboka mampitombo ny lisitr'ireo fahavalony izy ary manana olana ara-panambadiana. Nandritra ny tantara dia niseho ny fizarana fifandonana tamin'ny fahavalon'ny fikambanana.
Tsy azonao atao ny tsy mahita an'ity sarimihetsika ity, ao anatin'ny 10 ambony amin'ny fisafidianana ny American Film Institute!
An'ireo malaza talen'ny Martin Scorsese; hitantsika ny iray amin'ireo sarimihetsika mafia vao haingana navoaka tamin'ny 2006. Ao amin'ny tantara mampiahiahy ataon'ny polisy, hitantsika fa i Leonardo Di Caprio sy Matt Damon no mpandray anjara lehibe. Nahazo ny Oscar ny departed amin'ny sary tsara indrindra tamin'io taona io!
Mifototra amin'ny fiainan'ny olona roa niditra an-tsokosoko tamin'ny lafiny mifanohitra: polisy niditra an-tsokosoko tao amin'ny mafia ary nisy mobster niditra an-keriny tao amin'ny polisy. Fangaro mitambatra feno tantara an-tsehatra, mampiahiahy ary manaitaitra! Ilay mpilalao sarimihetsika eccentric Jack Nicholson dia manolotra seho marobe izay hanaitra ny fihetseham-ponao amin'ny fampisehoana miavaka rehefa milalao Frank Costello izy. Mpikotrokotroka mpandatsa-drà izy izay manana fahavalo maro ary manana fifandraisana akaiky amin'ny iray amin'ireo mahery fo roa, izay mitsikilo azy avy ao amin'ny Sampan-draharahan'ny polisy any Boston.
Misy telozoro fitiavana notarihin'ny psikology avy amin'ny departemantan'ny polisy.
Mahita fiolahana tsy nampoizina isika ao amin'ny tantara sy hetsika maro, ka izany no heverina ho iray amin'ireo sarimihetsika tsara indrindra amin'ny karazany. Tsy lazaina ihany koa fa ny Scorsese dia antoka foana amin'ny sarimihetsika misy famonoana tokana!
Ireo tsy azo kitikitihan'i Eliot Ness
Navoaka tamin'ny 1987, ity tantara mitohy mafia ity dia milaza ny mifanohitra amin'izany: izany hoe ny kinovan'ny polisy momba ny zava-mitranga amin'ny ady atao amin'ny asan-jiolahy. Nisy kintana tamin'i Kevin Costner ary i Robert de Niro no mpilalao fototra, ary koa Sean Connery.
Ny tetika sTany Chicago no nitrangan'izany tamin'ny vanim-potoanan'ny vahoaka amerikana romotra. Ny mpandray anjara dia a polisy izay asany hampiharana ny fandrarana, noho izany dia nanafika barazy tao amin'ilay Al Capone natahotra izy. Ao amin'io toerana io no ahitàny anomaly hafahafa izay mahatonga azy hieritreritra fa ny polisy ao an-tanàna dia omen'ny kolikoly mpivarotra izany; ka dManapaha hevitra hanangona ekipa iray hanampy anao handrava ny rindrin'ny kolikoly.
Doka goavam-be amin'ny sinema mahazatra XNUMX miaraka amin'ny hetsika maro no miandry anao!
Starring Denzel Washington, ity sarimihetsika manan-tantara ity dia ao amin'ny lisitry ny sarimihetsika mafia tsara indrindra satria mifototra amin'ny zava-misy marina izany ary mahita ny lafiny roa amin'ny fahombiazana isika amin'ny fiainana ivelan'ny lalàna.
ny Tantara Frank Lucas, iray amin'ireo mpivarotra mpivarotra zava-mahadomelina malaza maty noho ny antony voajanahary. Fetsy sy manan-tsaina i Lucas, ka nianatra nitantana ilay orinasa izy ary Nanomboka namorona orinasany manokana izy izay nanambatra ny fianakaviany iray manontolo fa nanetry tena izy. Nihaona tamin'i Eva i Lucas, vehivavy tsara tarehy nanapa-kevitra hanambady sy hanangana fianakaviana.
Tsy ho ela izy ireo Manomboka miaina amin'ny fomba hafahafa izy ireo izay manintona ny sain'ny mpitsikilo tsy mety simba Richie Roberts, nolalaovin'i Russel Crowe. Avy hatrany ny mpitsikilo dia manomboka fanadihadiana feno amin'ny tanjona hamoaka ilay lehilahy vaovaon'ny mafia hitondra azy any ambadiky ny bara.
Amin'ny fampandrosoana ny sarimihetsika dia afaka mahita isika sehatry ny herisetra sy fanaovana kolikoly lehibe izay ampiasain'ny mafia hanohizana ny asany.
Azontsika atao ny mahita ny lafiny maha-olombelona an'ireo mpisoloky amin'ity horonantsary ity, nefa tsy mitsahatra ny manenjika azy ireo ny olana. American Gangster dia nanjary foto-tsakafo ho an'ireo izay tia horonantsary Holywood mob!
Sarimihetsika Mafia natolotray hafa
Ho fanampin'ireo anaram-boninahitra voalaza etsy ambony, dia mahita hafa izay tena misy ifandraisany sy voalaza etsy ambany izahay:
Indray mandeha tany Amerika
Andian-jiolahy any New York
Fahafatesana eo amin'ireo voninkazo
Asehoy ny fitiavana banga
Fisamborana: kisoa sy diamondra
Tsy misy farany ny lisitra! Misy anaram-boninahitra tsy tambo isaina ho an'ity sokajy ity izay manome antsika seho fihetsika, ahiahy, rendrarendra ary herisetra lehibe. Ny fitsipika lehibe indrindra dia ny mamono olona mba ho tafavoaka velona!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Omeo fialamboly aho » General » Sarimihetsika Mafia tsara indrindra
Sarimihetsika azonao jerena maimaim-poana amin'ny YouTube (sy ara-dalàna)